1 Samuel 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 Igbe+ Jehova wee dịrị n’ọhịa ndị Filistia ruo ọnwa asaa.
2 Ndị Filistia wee kpọọ ndị nchụàjà na ndị na-agba afa,+ sị: “Gịnị ka anyị ga-eme igbe Jehova? Gwanụ anyị ihe anyị ga-eji bulaa ya ebe o si.”
3 Ha wee sị: “Ọ bụrụ na unu ga-ebula igbe Chineke Izrel, unu ebulakwala ya n’ejighị onyinye, n’ihi na unu aghaghị inye ya ihe ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma.+ Ọ bụ mgbe ahụ ka a ga-agwọ unu, unu ga-amarakwa ihe mere aka ya esighị n’ahụ́ unu pụọ.”
4 Ha wee sị: “Gịnị ka anyị kwesịrị inye ya ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma?” Ha wee sị: “Ọ bụ ọkpụ ikè ise e ji ọlaedo kpụọ na òké ise e ji ọlaedo kpụọ ka unu ga-enye ya, dị ka ole ndị isi+ ndị Filistia dị, n’ihi na onye ọ bụla n’ime unu na ndị isi unu nwere otu ihe otiti ahụ.
5 Unu ga-akpụkwa ihe yiri ọkpụ ikè unu na ihe yiri òké+ unu, bụ́ ndị na-emebi ala unu, unu ga-enyekwa Chineke Izrel otuto.+ Ma eleghị anya, ọ ga-eme ka aka ya nke dị arọ n’ahụ́ unu nakwa n’ahụ́ chi unu nakwa n’ala unu belata.+
6 Gịnị mere unu ga-eji kpọchie obi unu dị nnọọ ka ndị Ijipt na Fero kpọchiri obi ha?+ Ọ́ bụghị ngwa ngwa o mesichara ha ike+ ka ha hapụrụ ha, ha wee lawa?+
7 Ugbu a, burunụ ụgbọala ọhụrụ+ ma kwadebe ya, ya na nne ehi abụọ ndị na-enye ụmụ ara, nke na-anyatụbeghị yok ọ bụla,+ unu ga-ekegidekwa nne ehi ndị ahụ n’ụgbọala ahụ, unu ga-emekwa ka ụmụ ha laghachi ghara iso ha.
8 Unu ga-eburukwa igbe Jehova dọnye n’ụgbọala ahụ, ihe ndị ahụ e ji ọlaedo kpụọ,+ bụ́ ndị unu ga-enye ya ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma,+ ka unu ga-etinyekwa n’ime igbe dị n’akụkụ ya. Bulaanụ ya, ka ọ laa.
9 Unu ga na-elekwa anya: ọ bụrụ na ọ gbagowe n’ụzọ gara n’ókèala ya, ruo Bet-shimesh,+ ọ bụ ya mere anyị oké ihe ọjọọ a; ma ọ bụrụ na ọ gaghị n’ebe ahụ, anyị ga-amara na ọ bụghị aka ya metụrụ anyị; ọ bụ ihe mberede+ dakwasịrị anyị.”
10 Ndị ikom ahụ wee mee otú ahụ. Ha wee were nne ehi abụọ ndị na-enye ụmụ ara kegide n’ụgbọala, ma ha gbachibidoro ụmụ ha ụzọ n’ụlọ.
11 Ha wee dọnye igbe Jehova n’ụgbọala ahụ,+ tinyere igbe ahụ na òké ndị ahụ e ji ọlaedo kpụọ na ihe ahụ yiri ọkpụ ikè ha.
12 Nne ehi ndị ahụ wee gawa kpọmkwem n’okporo ụzọ gara Bet-shimesh.+ Ha nọ na-aga n’otu okporo ụzọ, na-ebe ubé ka ha na-aga, ha ahapụghịkwa ụzọ ahụ gaa n’aka nri ma ọ bụ n’aka ekpe. N’oge ahụ niile, ndị isi+ ndị Filistia nọ na-eso ha n’azụ ruo n’ókè nke ala Bet-shimesh.
13 Ndị Bet-shimesh nọ na-aghọ ọka wit+ na ndagwurugwu. Mgbe ha leliri anya hụ Igbe ahụ, ha malitere ịṅụrị ọṅụ n’ihi ịhụ ya.
14 Ụgbọala ahụ wee bata n’ala Jọshụa onye Bet-shimesh ma kwụrụ n’ebe ahụ, bụ́ ebe otu nnukwu nkume dị. Ha wee kpọwaa osisi ụgbọala ahụ, ha jikwa nne ehi+ ndị ahụ chụọrọ Jehova àjà nsure ọkụ.+
15 Ndị Livaị+ wee butuo igbe Jehova na igbe ahụ dị ya n’akụkụ, bụ́ ebe ihe ndị ahụ e ji ọlaedo kpụọ dị, ha wee dọkwasị ya n’elu nnukwu nkume ahụ. Ndị Bet-shimesh+ wee chụọ àjà nsure ọkụ, ha wee na-achụrụ Jehova àjà n’ụbọchị ahụ.
16 Ndị isi+ ise nke ndị Filistia hụrụ ya wee laghachi Ekrọn n’ụbọchị ahụ.
17 Ndị a bụ ọkpụ ikè ọlaedo nke ndị Filistia wetaara Jehova ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma:+ otu maka Ashdọd,+ otu maka Geza,+ otu maka Ashkelọn,+ otu maka Gat,+ otu maka Ekrọn.+
18 Òké ndị ahụ e ji ọlaedo kpụọ dị ole obodo ndị Filistia niile dị, ya bụ, obodo niile ndị isi ise ndị ahụ na-achị, malite n’obodo ukwu e wusiri ike ruo n’obodo nta nke dị n’ime ime obodo.
Nnukwu nkume ahụ a dọkwasịrị igbe Jehova bụkwa ihe àmà ruo taa n’ala Jọshụa onye Bet-shimesh.
19 O wee malite igbu ndị Bet-shimesh,+ n’ihi na ha nọ na-ele anya n’igbe Jehova. Ya mere, o gburu mmadụ iri asaa n’ime ha—puku mmadụ iri ise—ndị obodo ahụ wee malite iru uju n’ihi na Jehova asụwo ha akwụ.+
20 Ndị Bet-shimesh sịkwara: “Ònye pụrụ iguzo n’ihu Jehova bụ́ Chineke a dị nsọ,+ oleekwa ndị ọ ga-agakwuru hapụtụ anyị aka?”+
21 N’ikpeazụ, ha zigaara ndị bi na Kiriat-jierim+ ndị ozi, sị: “Ndị Filistia ebughachiwo igbe Jehova. Gbadatanụ. Burunụ ya gbagoo n’ebe unu nọ.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D9%26Chapter%3D6%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl